အသက် ၉၅ နှစ်မှာ ကြွေလွင့်သွားတဲ့ Marvel ရဲ့ ဖန်တီးရှင် Stan Lee
13 Nov 2018 . 10:46 AM
MCU တဖြစ်လဲ Marvel Cinematic Universe ဟာ နောက်ကွယ်က ဖန်တီးရှင် Stan Lee သာ မရှိခဲ့ရင် အခုလိုမျိုး အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ။ Marvel Comic Writer Stan Lee သာ မရှိခဲ့ရင် Iron Man က Fantastic Four နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ကိစ္စတွေ၊ Captain America ကို Doctor Strange နဲ့အတူ မင်္ဂလာပွဲတက်ရောက်တာတွေ ဒါတွေအကုန်မြင်တွေ့ခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခု ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ Los Angeles ၊ California မှာ ရှိတဲ့ Cedars-Sinai Medical Center မှာ အသက် ၉၅ နှစ်နဲ့ သူဖန်တီးခဲ့တဲ့ Marvel Universe ကနေ ကြွေလွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
Stan Lee ရဲ့ သေဆုံးမှုဟာ Marvel Superhero ကို နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ Marvel Fans တွေအပါအဝင် Comic Book တွေမဟုတ်တဲ့ အခု Avengers : Infinity War ရုပ်ရှင်အထိ ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့ Iron Man ၊ Captain America ၊ Spider-Man ၊ Doctor Strange နဲ့ Black Panther လိုရုပ်ရှင်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ပါ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်လာတာပါ။
အခုလိုမျိုး Stan Lee ရဲ့ သေဆုံးမှုမှာ Stan Lee ရဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ J.C. Lee က Reuters သတင်းဌာနကို “အဖေ့အနေနဲ့ သူရဲ့ Fans တွေကို လေးစားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဆက်လက်ဖန်တီးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အလုပ်ကို ချစ်ကြောင်းနဲ့ အခုလိုမျိုး နေထိုင်ရတာကို အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိသားစုက သူ့ကို ချစ်သလိုပဲ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ချစ်ပြီးတော့ လုံးဝကို အစားထိုးလို့မရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Stan Lee ဟာ ၁၉၂၂ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကလေးဘဝဟာ အလွန်ကိုစိတ်ဓါတ်ကျဖို့ကောင်းလောက်အောင် ဖြတ်သန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်း ၂၀၀၂ ခုနှစ်က ဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ သူရဲ့ Autobiography Excelsior! မှာ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက သူ့ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက အလုပ်အတည်တကျဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်တောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာက သူ့ကို တသက်လုံးအတွက် Effect ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်များ အသက် ၁၇ နှစ်က စတင်ပြီးတော့ Superhero တွေအတွက် Script တွေစတင်ရေးသားခဲ့ပြီး အခုအချိန်အထိ တခြားသောသူတွေအတွက်အမှတ်ရဖွယ် ကလေးဘဝတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တာလားဆိုတာက စဉ်းစားစရာပါ။
Stan Lee Cameo in Spider-Man
Stan Lee ဟာ Marvel ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Spider-Man ၊ Iron Man ၊ Thor ၊ Doctor Strange ၊ Ant-Man နဲ့ Avengers အပါအဝင် ရုပ်ရှင်တွေအများအပြားမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ အခုမကြာခင်ဆက်ပြီး ပြသဖို့ရှိတဲ့ Avengers4အတွက်လည်း Cameo ကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးပြီလို့ သိရတဲ့အတွက် ဒီ Avengers4က နောက်ဆုံးသော Stan Lee အနေနဲ့ Cameo အနေနဲ့ပါဝင်တာက နောက်ဆုံးသော Marvel ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
MCU တဖွဈလဲ Marvel Cinematic Universe ဟာ နောကျကှယျက ဖနျတီးရှငျ Stan Lee သာ မရှိခဲ့ရငျ အခုလိုမြိုး အောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိဖို့ဆိုတာ ဖွဈနိုငျမှာမဟုတျတဲ့ ကိစ်စရပျတဈခုပါ။ Marvel Comic Writer Stan Lee သာ မရှိခဲ့ရငျ Iron Man က Fantastic Four နဲ့ ပူးပေါငျးတဲ့ကိစ်စတှေ၊ Captain America ကို Doctor Strange နဲ့အတူ မင်ျဂလာပှဲတကျရောကျတာတှေ ဒါတှအေကုနျမွငျတှခေဲ့ရမှာမဟုတျပါဘူး။ အခု ၂၀၁၈ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၁၂ ရကျနေ့ Los Angeles ၊ California မှာ ရှိတဲ့ Cedars-Sinai Medical Center မှာ အသကျ ၉၅ နှဈနဲ့ သူဖနျတီးခဲ့တဲ့ Marvel Universe ကနေ ကွှလှေငျ့သှားပွီဖွဈပါတယျ။
Stan Lee ရဲ့ သဆေုံးမှုဟာ Marvel Superhero ကို နှဈသကျသဘောကတြဲ့ Marvel Fans တှအေပါအဝငျ Comic Book တှမေဟုတျတဲ့ အခု Avengers : Infinity War ရုပျရှငျအထိ ဖွဈလာစခေဲ့တဲ့ Iron Man ၊ Captain America ၊ Spider-Man ၊ Doctor Strange နဲ့ Black Panther လိုရုပျရှငျတှကေို ကွိုကျနှဈသကျခဲ့တဲ့သူတှအေတှကျပါ ကွီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတဈခုဖွဈလာတာပါ။
အခုလိုမြိုး Stan Lee ရဲ့ သဆေုံးမှုမှာ Stan Lee ရဲ့ သမီးဖွဈတဲ့ J.C. Lee က Reuters သတငျးဌာနကို “အဖအေ့နနေဲ့ သူရဲ့ Fans တှကေို လေးစားမှုတဈခုအနနေဲ့ နောကျဆုံးအခြိနျအထိ ဆကျလကျဖနျတီးမှုတှကေိုပွုလုပျခဲ့ပွီးတော့ သူ့ရဲ့ အလုပျကို ခဈြကွောငျးနဲ့ အခုလိုမြိုး နထေိုငျရတာကို အလှနျကွိုကျနှဈသကျခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ မိသားစုက သူ့ကို ခဈြသလိုပဲ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး ခဈြပွီးတော့ လုံးဝကို အစားထိုးလို့မရတဲ့သူတဈယောကျပါ” လို့ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Stan Lee ဟာ ၁၉၂၂ ခုနှဈမှာ မှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး ကလေးဘဝဟာ အလှနျကိုစိတျဓါတျကဖြို့ကောငျးလောကျအောငျ ဖွတျသနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအကွောငျးကိုလညျး ၂၀၀၂ ခုနှဈက ဖွနျ့ခြီခဲ့တဲ့ သူရဲ့ Autobiography Excelsior! မှာ အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက သူ့ရဲ့ ဖခငျဖွဈသူက အလုပျအတညျတကဖြွဈဖို့အတှကျ ဘယျလောကျတောငျကွိုးစားခဲ့ရတယျဆိုတာက သူ့ကို တသကျလုံးအတှကျ Effect ဖွဈခဲ့တယျလို့ ပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့မြား အသကျ ၁၇ နှဈက စတငျပွီးတော့ Superhero တှအေတှကျ Script တှစေတငျရေးသားခဲ့ပွီး အခုအခြိနျအထိ တခွားသောသူတှအေတှကျအမှတျရဖှယျ ကလေးဘဝတှကေို ဖနျတီးပေးခဲ့တာလားဆိုတာက စဉျးစားစရာပါ။
Stan Lee ဟာ Marvel ရုပျရှငျတှဖွေဈတဲ့ Spider-Man ၊ Iron Man ၊ Thor ၊ Doctor Strange ၊ Ant-Man နဲ့ Avengers အပါအဝငျ ရုပျရှငျတှအေမြားအပွားမှာ ပါဝငျခဲ့ပွီးတော့ အခုမကွာခငျဆကျပွီး ပွသဖို့ရှိတဲ့ Avengers4အတှကျလညျး Cameo ကို ရိုကျကူးခဲ့ပွီးပွီလို့ သိရတဲ့အတှကျ ဒီ Avengers4က နောကျဆုံးသော Stan Lee အနနေဲ့ Cameo အနနေဲ့ပါဝငျတာက နောကျဆုံးသော Marvel ရုပျရှငျဖွဈလာနိုငျပါတယျ။